China LEDD730740 Ceiling LED LED roa loha fitsaboana ara-pahasalamana miaraka amin'ireo mpamokatra sy mpamatsy tselatra avo lenta | Wanyu
LEDD730740 Ceiling LED LED Head Head Medical Light amin'ny alàlan'ny tselatra avo
LEDD730740 dia manondro hazavana fandidiana fitsaboana karazana petal roa.
Ho an'ny efitrano fandidiana miaraka amina boaty manadio, ny karazana felana dia afaka misoroka ny fikorianan'ny rivotra ary mampihena ny faritra mikorontana amin'ny fikorianan'ny rivotra laminera. Ny hazavana fandidiana indroa LEDD730740 dia manome ny hazavan'ny 150,000lux sy ny mari-pana amin'ny loko 5000K ary ny max CRI an'ny 95. Ny masontsivana rehetra dia azo ovaina amin'ny ambaratonga folo amin'ny tontonana fanaraha-maso ny efijery LCD. Ny tahony dia vita amin'ny fitaovana vaovao, mahatohitra ny mari-pana ambony sy ny tsindry avo. Omeo fitaovam-piadiana lohataona telo, haitraitra lafo vidy, lafo ary lafo vidy.
Hopitaly tsy miankina sy miankina amin'ny fanjakana, Laboratoara, toeram-pitsaboana sns.
Ny hazavana fandidiana karazana petal dia afaka misoroka ny fikorianan'ny rivotra ary mampihena ny faritra mikorontana amin'ny fikorianan'ny rivotra laminera.
Ny mpitazona hazavana ara-pitsaboana dia famolavolana mihidy tanteraka. Ny fonenana azo esorina dia mahatohitra ny mari-pana avo sy ny tsindry avo izay mahafeno tanteraka ny fepetra famonoana otrikaretina isan'andro.
2. Jiro fotsy sy mavo mifangaro
Ny fampiasana jiro mavo sy fotsy, jiro mifangaro, dia manatsara ny mari-pana amin'ny loko sy ny fandikana loko, ary manampy ny dokotera hanavaka ny rà sy ny sela.
3. Fanazavana lalina
Ny jiro fandidiana ara-pitsaboana dia manana fahasimbana maivana eo amin'ny 90% eo amin'ny farany ambanin'ny sehatry ny fandidiana, noho izany dia ilaina ny fanazavana be mba hiantohana ny jiro milamina. Ity hazavana fandidiana indroa ity dia afaka manome hazavana hatramin'ny 150,000 ary hatramin'ny halalin'ny fahazavana 1400mm.
4. Rafitra fampifanarahana an-tsaina
Ny mari-pana amin'ny loko, ny hamafin'ny jiro ary ny fanondroana loko ny jiro fandidiana ara-pahasalamana dia azo ovaina miaraka amin'ny alàlan'ny tontonana fanaraha-maso LCD.
5. Famatsiana herinaratra azo itokisana
Ny famatsian-tsolika miova miaraka amina marika fanta-daza iraisam-pirenena dia miasa marimaritra iraisana eo amin'ny sehatry ny AC 110V-250V. Ho an'ireo faritra misy herinaratra tsy mitombina, manome safidy hafa koa izahay miaraka amin'ny fahaiza-manao fanoherana mahery vaika.
6. Safidy fividianana safidy
Ho an'ity hazavana fandidiana fitsaboana sandry roa ity, dia misy amin'ny fifehezana rindrina, fanaraha-maso ary rafitra fitohana bateria.
Previous: LEDD740 Ceiling Mount LED LED Loha iray OT Jiro miaraka amin'ny fanaraha-maso lavitra
Manaraka: LEDD620620 Ceiling LED LED Dome Dome Fitaovana fitsaboana miaraka amin'ny fanaraha-maso ny rindrina
DL700 Halogen Mobile Operating Theatre Fahazavana ...